इण्डोनेसियामा अवधारणा प्रस्तुत गर्दा... - Goraksha Online
दाङ,१६ माघ । सरल बहुप्रतिभाका धनी, जो अनवरतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारीका साथै सामाजिक कार्यमा दत्तचित भएर सधै क्रियाशील हुने व्यक्ति झरेन्द्र खरेल । साबिक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मा जन्मिएर यही आफ्नो कर्मथलो बनाएका छन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका खरेल विगत २३ बर्षदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सूचना अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् । उनले आफू सधै जीवनमा खुसी हुने गरेको बताए । उनले आफ्नो जीवन संघर्षमा आएका उकाली–ओरालीलाई पार गर्दै आफ्ना खुसीहरु भेटिएको बताए । मिजासिला, सधै हसिलो र दुःख–सुखमा साथ र सहयोग गर्ने खरेलको खुसी खोज्दै जाँदा उनले आफू सधै खुसी हुने गरेको बताए । उनका खुसीहरु खोतत्दै गर्दा उनी कार्यकक्षमा काममा तल्लिन थिए ।
उनले आफ्नो पहिलो खुसी इण्डोनेसियामा निजी साझेदारी सरसफाई अवधारणा प्रस्तुत गर्दाको बताए । २०७६ मंसिर ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म इण्डोनेसियामा भएको फोहरमैला तथा वातावरण ब्यवस्थापनसम्बन्धी कनेक्टिभ सिटी नेटवर्क कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट मलाई जाने अवसर मिल्यो । म २ गते बेलुका मलेसिया हुँदै इण्डोनेसिया पुगे । बिभिन्न देशका १५ वटा सिटीका ब्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । त्यस कार्यक्रममा हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको सरसफाई अवधारणा प्रस्तुत गरेका थियौं । बिना पैसामा यसरी काम गर्न सकिन्छ गरिब देशमा भन्ने अवधारणा थियो ।
हामीले तुलसीपुरमा चलेको ग्रिन तुलसीपुर क्लिन तुलसीपुरको अवधारणा प्रस्तुत गरेका थियौं । फोटो, भिडियोसहित कार्यक्रम प्रस्तुत गरी देखाउँदा बिना पैसामा राम्रो काम भनेर उनीहरु अचम्म परे र इण्डोनिसयाको एउटा सिटीको सहभागीले कार्यक्रमस्थलमै हाम्रै अवधारणाअनुसारको एक्सन प्लान तयार पारे । हामीले नेपालको तर्फबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेको सो कार्य त्यहाँ प्रस्तुत गर्दा मलाई निकै खुसी लाग्यो । ‘त्यही नै मैले मेरो पहिलो खुसी बनाएको छु’ उनले भने । अन्य खुसीहरु पनि धेरै छन् तर त्यसैलाई पहिलो खुसी लेखिदिनुहोला, मुस्कुराउँदै उनले भने । उनले मलेसिया, ईण्डोनेसिया र सिंगापुरको केही स्थान हेर्ने र सरकारी तवरबाट सञ्चालित कार्यक्रम हेर्ने र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने अवसर मिलेको र त्यो मेरो पहिलो बैदेशिक अनुभव थियो र खुसी लागेको बताए ।
त्यस्तै खरेलले २०५२ सालमा तुलसीपुरस्थित गुरुजजुर माबि र शान्ति दिप बोर्डिङ स्कुलमा पहिलो पटक अध्यापन गर्दा ज्यादै खुसी लागेको बताए । उनले आफूले अध्यापन गराएका विद्यार्थीहरु ठूलो ठूलो पोष्टमा पुगेको र हाल पनि उनीहरुले सम्झँदा खुसी लाग्ने गरेको सुनाए । त्यस्तै उनले अर्को खुसी २०५३ सालमा सरकारी नोकरीमा प्रवेश गर्दाको बताए । उनले आफ्नै जन्म स्थान साविक वडा नं. ३ मा वडा सचिवको जिम्मेवारीमा कार्यारम्भ गर्दा झनै खुसी थपिएको बताए । ‘जहाँ मैले उकाली–ओराली र कुटो–कोदालो गरेँ र अध्ययन गरेँ त्यही वडा सचिव भएर जनताको काम गर्दा निकै खुसी प्राप्त भएको उनले बताए ।
त्यस्तै खरेलले वडा सचिव हुँदा कल्ले गाउँमा आइते घर्तीको घरमा आगलागी भई घरगोठ जले, कागजात सबै जलेको र गरिब भएकाले उनीहरुले कागजात बनाउन नसकेको र आफ्नो सहयोगबाट घोराही पुगेर उनीहरुको नागरिकता र पुर्जा गराइदिएकोमा आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताए । ‘उनीहरु आजसम्म पनि मलाई सम्झना र सम्मान गर्दछन् यसैमा मलाई खुसी लाग्छ’ उनले भने । ‘सामाजिक सेवामा मैले गरेको कार्यले मलाई आत्मसन्तुष्टि गराएको छ’ उनी भन्छन् । त्यस्तै उनले युवाहरुको संस्था तुलसीपुर नगर जेसीजको सन् २०१५ मा हुँदा खुसी प्राप्त भएको बताए । उनले सबै साथीभाइको मन जितेर जेसीजजस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँदा खुुुसी भएको सुनाए ।
उनले अध्यक्ष हुँदा जापानबाट सुपानेट झुल १२५ थान ल्याई तुलसीपुर ५ को दलित बस्तीका बासिन्दालाई उपलब्ध गराएको र यसले पनि आफूलाई अर्को सन्तुष्टि प्रदान गरेको बताए । त्यस्तै अर्को खुसी २०७३ सालमा छोरा सुमन खरेलको अष्ट्रेलियाको भिसा लाग्दा आर्थिकमा सबै साथीभाइले सहयोग गर्दा लागेको बताए । ‘मसँग जम्मा १ लाख ५० हजार मात्र थियो, बैंकले लगानी ठप्प पारेको थियो, १७ जना आफन्त तथा साथीभाइहरु छनोट गरे र फोन तथा भेटघाट गरेर ऋण मागे सबैबाट गरी मलाई ४५ लाख चाहिनेमा १ करोड पैसा सहयोग प्राप्त भयो यसले आफूलाई अत्यन्तै खुसी प्राप्त भएको बताए । त्यसदिन म यति खुसी भएकी सीमै छैन ।
बाआमा, श्रीमतीलाई बल्ल मेरो पहिचान दिन सकेजस्तो लाग्यो । तस्तै उनले अर्को खुसी दाङमा पहिलो पटक घोराहीमा रेडियो स्वर्गद्वारी खुलेको र आफूलाई रेडियोमा काम गर्ने साह्रै चाहना भएकोले स्टेशन म्यानेजर दधिराम सुवेदीसँग भेटेर तुलसीपुर नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तुफानसिंह केसीसँग अनुरोध गरेसँगै स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधिलाई रेडियोबाट सार्वजिक गर्न पाउँदा पनि खुसी भएको बताए । ‘सुशासनको प्रत्याभूति गरौं भने सरले सहर्ष स्वीकारेर मलाई स्वीकृति दिनुभयो र मैले पहिलोपटक रेडियो स्वर्गद्वारीमा तुलसीपुर नगरपालिकाको गतिविधि सञ्चालन गरे त्यो पनि मेरो खुसीको क्षण हो’, उनले भने ।
त्यससँगै रेडियो तुलसीपुरमा सन्देश गाउँसम्म कार्यक्रममार्फत ७–८ देशका नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष टेलिफानमार्फत सन्देश दिन पाउँदा निकै खुसी लागेको थियो । त्यस्तै बैदेशिक यात्राका क्रममा म नगरप्रमुखको नेतृत्वमा गएको एक उच्चस्तरीय टोलीमा हरिद्वार जाने मौका मिल्यो । तुलसीपुरमा बृहद योगशिविर सञ्चालन तथा तुलसीपुरमा योगबिज्ञान, गौशाला तथा संस्कृत बाङ्मय केन्द्र, जडिबुुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र तथा अध्यापन केन्द्र स्थापनाका लागि रामदेश महाराज र बालकृष्ण महाराजलाई भेट्न हरिद्वार पुगियो ।
त्यो मेरो पहिलो हरिद्वारको भिजिट थियो त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा थियो । त्यस्तै आफूलाई सधै सहयोग र अगाडि बढ्न परिवारले पनि सहयोग गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ग्रेट अरनिको माबि र लिटिल हेभन माविमा अध्यापन गराउँदै आएका खरेल नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशनको केन्द्रीय सचिव, हाल स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको ५ नं. प्रदेश संयोजक, १४ बर्ष अबिछिन्नरुपमा सञ्चार माध्ययममा क्रियाशील नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय पार्षद, तुलसीपुर नगर जेसीजको सन् २०१५ का शाखा अध्यक्ष हुन्
पर्यटन, कृषि र व्यवसायको प्रवद्र्धन महोत्सवको मुख्य उद्देश्यः महरा
महेन्द्र आधारभूत विद्यालय दलजितपुरमा सरस्वती मन्दिर उद्घाटन